Kooxaha Roma, Inter Milan iyo Arsenal oo ku tartamaya saxiixa xiddig ka ciyaara Caasimadda Spain – Gool FM
Kooxaha Roma, Inter Milan iyo Arsenal oo ku tartamaya saxiixa xiddig ka ciyaara Caasimadda Spain
Haaruun April 11, 2020
(Madrid) 11 Abril 2020. Kooxaha Roma iyo Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku biireen loollanka loogu jiro saxiixa xiddiga ka tirsan kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey.
26-sano jirkan ayaa si cajiib ah uga soo ciyaaray khadka dhexe ee kooxda Diego Simeone xilli ciyaareedkan, isagoo u saftay 35 kulan tartammada oo dhan ka hor ganaaxii coronavirus.
Arsenal ayaa si xooggan loola xiriirinayay inay u dhaqaaqdo xiddiga heerka caalami ee dalka Ghana isbuucyadii u dambeeyay, laakiin Gunners ayaa lagu soo waramayaa inay tartan adag kala kulmayso saxiixa Partey.
Sida laga soo xigtay majaladda lagu magacaabo Mundo Deportivo, Inter iyo Roma ayaa labadoodaba isha ku haya heshiis ay ku doonayaan xiddiga khadka dhexe ee aadka loo qiimeeyo, kaasoo qandaraaska uu kula jiro kooxda Atletico Madrid uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedka 2023-ka.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in aan wax heshiis ah uusan dhex marin xiddigan Partey iyo Kooxda Atletico, kaasoo ku saabsan heshiis cusbooneysiin, laakiin kooxda Isbaanish-ka ah ayay ka go’an inay Partey ku sii haysato garoonkeeda Wanda Metropolitano.
Manchester United ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay xiisaynayso xiddiga reer Ghana, kaasoo lagu qiimeeyo 42 milyan oo gini.
Thomas Teye Partey ayaa kooxda Atletico Madrid wuxuu kaga soo biiray naadiga Almeria, wuxuuna kooxda ka dhisan Magaalada Madrid u saftay 118 kulan, isagoo u dhaliyay 11 gool tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda ku ciyaarta garoonka Wanda Metropolitano ee Atletico Madrid.
"Lautaro Martinez si fiican ayuu u noqon karaa Sergio Aguero cusub" – Weeraryahankii hore ee Xulka Argentina
Mid ka mid ah Kooxaha waa weyn ee horyaalka Premier League oo doonaysa inay la wareegto Dries Mertens